Maxay Xukuumaddu ka tiri ciidanka la geeyay Baladweyne? | KEYDMEDIA ENGLISH
Xukuumada ayaa shaaca ka qaadday in aysan waxba kala socon go’aanka ciidanka Gorgor iyo Haramcad loogu daabulay Baladweyne, xilli lagu guda jiro doorashooyinka dalka oo maraya meel xasaasi ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya, General Muqtaar Xuseen Afrax, oo warbaahinta kula hadlay caasimadda ayaa sheegay inXukuumadda uu hoggaamiyo Maxamed Xuseen Rooble, ayasan waxba kala socon ciidamo shalay loo daabulay magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan.
General Muqtaar, wuxuu meesha ka saaray warar soo baxay galinkii danbe ee shalay oo sheegayay in Farmaajo iyo Rooble, isla ogyihiin askarta Gorgor iyo Haramcad ee ka degay Baladweyne, wuxuuna taliyayaasha ciidanka hoggaaminaya ugu baaqay in ay ka fogaadaan ku lug-yeelashada qalalaaso amni iyo hurinta colaado hor leh oo ka dhaca magaalada.
“Inigoo ah Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, markii aan arrinkaas iska wareysannay, inaga oo dhanna aan RW u tagnay, arrintaas ma aha arrin ay Xukuumaddu ka war-qabto, oo ciidanka meeshaas la geeyay iyo ujeeddada loo geeyay RW Rooble iyo Xukuumaddiisa kama war qabaan”, ayuu yiri General Muqtaar.
Wuxuu xusay in xasaradaha siyaasadeed ee gobolka ka aloosan aan xilligaan awood ciidan lagu xallin karin, oo wadahadal iyo isku tanaasul loo baahan yahay, isla-markaana dadkii xalkaas raadin lahaa aysan ahayn shaqsiyaadka ciidanka ku daad-gureeyay Baladweyne.
Wasiirka Mukhtaar, wuxuu caddeeyay in Xukuumaddu war buuxa ka soo saari doonto xaaladda cakiran ee Hiiraan, maadaama Ra’iisul Wasaarahu, masuul ka yahay hirgalinta hanaanka doorashooyinka dalka, magaaladuna ka mid tahay goobaha kuraastu taal.
Ciidamada ayuu ugu baaqay in kaliya howlaha loogu tala galay ku ekaadaan, kuna sugnaadaan xeryahooda. “Colaad argagixiso kama taagna Baladweyne gudihiisa, kacdooonno siyaasadeed ayaa jira, waxayna u baahan yihiin in wadahadal lagu xalliyo”, ayuu ku soo gabagabeeyay.
Sida ay hore u baahisay KON General Muqtaar, oo hadda haya xilka ugu sarreeya ee beesha tabashada qabta [Xawaadle] ku leedahay Xukuumadda Rooble, ayaa hore ugu fashilmay inuu xal u helo xaaladda magaalada uu ka soo jeedo ee Balaweyne, kadib culeyso ka yimid dhanka Farmaajo iyo Fahad Yaasiin.
Isku-dayo xal-raadin, oo uu garwadeyn ka ahaa, Wasiirka Arrimaha Gudaha, oo ay wehliyeen siyaasiyiin ku heyb ah, ayaa xilliyo kala duwan fashilmay, kadib markii darafyada is haya ka biyo diideen soo jeedin iyo qorshe nabadeed oo ka socday Wasaaradda uu ugu sarreeyo General Muqtaar.
Inta badan dadka deggan Hiiraan, ayaa si weyn uga soo horjeeda maamulka Hishabeelle, waxaana xarunta gobolka, hore loogu diiday inuu cagaha dhigo, Cali Guudlaawe, oo Farmaajo iyo Fahad u boobeen kursiga ugu sarreeyay maamulkaas.
Ciidan uu hoggaaminayo sarkaal magaciisa lagu sheegay Nuur Dheere oo ka soo hor jeeda in Guudlaawe la geeyo Baladweyne, ayaa ku sugan qeybo ka mid ah magaalada, halka ciidan xooggan oo Gorgor iyo Haramcad, ka socda la geeyay shalay, waxaana xilli kasta la filan karaa isku dhacyo ciidan.